3d na-ebi akwụkwọ, Laser Machine, 3d atụ ihe - Ecubmaker
4 Agbanwe Agbanwe Module
High Printing Speed ​​& High Printing nkenke
Wepụ ihe nakawa etu esi, ihe onyonyo, imewe n’elu ihe dị iche iche
Dual-agba 3D Printing
Obere mmerụ ọkụ & enweghị agba agba
Ebugharị, Mill n'elu ihe dịgasị iche iche
Nmeputa ohuru ohuru iji gboo mkpa gi
Anyị Nwere Ọganihu Atụmatụ Want Chọrọ
Anọ-n'ígwé Heatable Magnetik Platform
180x180x180 Bipute Nha
Ihe TOYDIY 4-in-1 3D Printer Nwere Ike Ime
Ọrụ Ndị Ọzọ, Nhọrọ Ndị Ọzọ Iji Nyochaa
nke EcubMaker dere
nke Edward Scott dere
Spiderman 3D Mmetụta
ihe akpụrụ akpụ
Onye njide ihe
nke Mark Johnson dere
nke Williams dere
Hụrụ Obodo nke Ndị Ọrụ 5000+
Mgbe m gụchara ndị na-ebi akwụkwọ ndị ọzọ ma nwee ike iji ụfọdụ, ana m agwa ndị mmadụ na nke a bụ ihe mbupute 3D kacha mma ị ga-enweta ma mụta .Mgbe ahụ rute na nnukwu onye nbipute ma ọ bụrụ na oghere oghere pere mpe. Ejiri m ya maka ebumnuche azụmahịa m na ịhụnanya igwe a nke ukwuu.
Adịghị m aka nká ịmụ ihe ọhụrụ!
My ToyDIY 4 na 1 na-arụ ọrụ dị ukwuu!
Ogwe aka GoPro dị ntakịrị na-emebi emebi na 15% infill ya mere m tinyere ya na 50% ... na-atụgharịkwa filament temp na 210 C.
Amụtara m ịkwụsịtụ mbipụta ahụ na teepu ya na teepu ya dị ka mkpuchi dị elu maka nrapado akwa.
The laser n'ezie Uwe m n'ụlọ mere iPad guzo.
Nke a bụ ụfọdụ obere ngwaọrụ m na-eme atụmatụ ma bipụta: ndọtị ụdọ mkpachị iji jide ya n'elu radiator. New tilt anọchi m keyboard. Egwuregwu ahụ na-atọ ọchị bụ ahụ mgbu na nrụgide nrụgide, ị na-ahụ ebe mgbu na akụkụ kwesịrị ekwesị nke efere.
Achọrọ igbe eletriki gbara gburugburu, bipụta otu. Printer e biri ebi rafti na otu agba site onwe loading na ebutu mkpa filament. Isi ndọta mara mma. Ihe niile na - ekewapu n'enweghi ike.
Nkpuchi ihu dị njikere! Obi ụtọ ịme ihe bara uru n'oge a.
New laser omume na-eme ka a ukwuu nicer na Cleaner apa ọkụ! Daalụ maka mmemme emelitere!
Ọ bịara ngwa ngwa ma mee ka ọ dị mma. Ọ dị mfe iji na ihe niile, ọ dị m mma ma m wepu ya, echere m na enwere m ike ịnwe isi isi 3d na-ebi akwụkwọ ma ọ bụrụ na m ga-enwetakwu ihe mmụta miri emi n'ihe banyere akụkụ ngwanrọ nke ihe. M gbakwunyere nyocha nke m na YouTube ma dịka ị nwere ike ịhụ isi lazer na-arụ ọrụ dị egwu.
Gbutuo !! Agbanyeghị na nke a bụ ihe mbido 3D izizi m- ahụbeghị m ọtụtụ okwu iji rụọ ọrụ na ya. Naanị were ọtụtụ awa ịmara maka ọrụ 4 ahụ n'otu n'otu. Emeela nnwale ule niile na-enye na kaadị SD. Na kpamkpam m nwere ike ikwu na ọ bụ jụụ kemmasi.
Tupu na-aga n'ihu nkọwa m chọrọ banyere na- ha ahịa ọrụ dị ukwuu. M kpọtụụrụ ha maka a aghara n'oge CNC-egwe ọka. Ha na-aza n'ime obere oge site na nkọwa kwesịrị ekwesị. Nke ahụ bụ nnukwu ọrụ!
Ruo ugbu a, anọ m na-anwale Mbipụta nkịtị ma ọkara ọkara site na mbipụta elekere 30. Onye nbipute biara na amazon si ngwa ngwa, o juru ya nke oma. Onweghi ihe mebiri mgbe m mepere igbe ahụ ma ọ dị mfe ibutu ya. Ihe kpuchie ihe na ụfụfụ iji gbochie mmegharị ọ bụla, isi niile nọkwa na afụ. Ọ dị mfe imeghe kwa.
Izu ole na ole gara aga ezigbo enyi m Molly nwamba ahụ nwụrụ. Achọrọ m ịme obere ncheta maka ya ma jirikwa ọrụ atọ nke ToyDIY.
Enwere m ike iji ngwa nbipute a na igbe enweghị nsogbu. Azụrụ m nke a na February nke 2020 iji rụọ ọrụ maka ụlọ akwụkwọ. N'oge ahụ, amaghị m ihe ọ bụla gbasara mbipụta 3D, laser etching ma ọ bụ CNC osise.
Enwere m mbipụta otu ọnwa ma ọ bụ karịa na isi mbipụta 3D wee ziga m onye nnọchi anya ngwa ngwa.
Companylọ ọrụ na-aza ngwa ngwa na ajụjụ na esemokwu n'oge ụbọchị ọrụ na China, yabụ enwere obere oge na oge nzaghachi. Ma ha na-eme ngwa ngwa na-eburu n'uche oge dị iche.
Ezigbo onye nbipute! Ka ọ dị ugbu a, emere mpempe akwụkwọ filament, mana dị ka vidiyo ahụ, buru faịlụ ahụ wee pịa bọtịnụ ahụ. Ọzọ m ga-anwale ọrụ laser.
Achọrọ m ebipụta akwụkwọ 3-in-1 (yana mbipụta FDM, ihe osise CNC, na osise laser) mana ọtụtụ igwe ndị a dị oke ọnụ. Ya mere, mgbe m chọtara onye nbipute 4-in-1 nke dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ, ekpebiri m ịga maka ya wee hụ ihe m chere banyere igwe ahụ. Na m obi ụtọ na m zụọ.
Ecubmaker 4-in-1 Printer na-abịa nke ọma. Enwere igbe ndị pere mpe, ndị a kpọrọ aha n'ime nnukwu igbe ahụ- n'ime igbe ndị a ị nwere ike ịchọta isi ọrụ 4, filament, filament holder, na ngwaọrụ / akụkụ. Inside nke nnukwu igbe ị pụrụ ịhụ na ngwa nbipute ahu, na-agbakọta. Onye nbipute a chọrọ nchikọta nke pere mpe- ihe niile ị ga - eme bụ itinye isi ngwa ọrụ dị mkpa wee bido ibipụta ya! Tupu ị na-eji onye nbipute ahụ, achọrọ m ilebanye anya na ngwa nbipute ya na usoro ya.
Ojiji nke igwe a di otutu. Ọ bụ ya mere m ji hụ 3DPrinter m n’anya. Achọghị m ichegbu onwe m maka ọrụ 4 ọ nwere ọzọ. Ma njirimara ọrụ ndị ahụ dị ezigbo mma.
Auto leveling atụmatụ na-enyere m otutu si enwe mbipụta nsogbu. Ikpo okwu anaghị ekpo ọkụ n'ihi teknụzụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. N'ihi ya, m nwere ike mfe wepụ m 3D Printing nri mgbe dechara ya.
Na ihe ndị ọzọ dị mkpa bụ, ọ dịghị mkpa ka ihe ọ bụla gbakọta, ya preemble igwe. N'oge a, igwe ole na ole na-enye ụdị usoro a.
Sọftụwia maka imepụta ya na-enye, juputara na ọdịnaya. M nwere ike mfe dezie ma ọ bụ chepụta m nlereanya na ecubware software.
M ga-akwado onye ọ bụla ịzụta igwe a, dịka ọ dị ọnụ ala site n'iji ya tụnyere ọtụtụ atụmatụ na ọrụ.
Na-arụ ọrụ dị ukwuu! Ihe niile rutere nke ọma dịka ha kpọsara. Ruo ugbu a ka emechara ihe Laser kachasị ma hụ mmetụta sitere na obere igwe a n'anya. M wetara ụfọdụ eke egwurugwu filament tupu m ebipụta m beign. Ke akpa ini were nwetara ezigbo utịp. Enwere m olile anya na otutu enwere ichoputa ma muta.
Na-achọ onye nbipute 3d ịzụrụ maka ụbọchị ọmụmụ ụbọchị nwa m nwoke. Were ọtụtụ ụbọchị iji kpebie ma mechaa weta 4in1 a. N'ezie kwesịrị ya! Na-arụ ọrụ izu ole na ole iji nwalee ụfọdụ akwụkwọ 3D na laser ụfọdụ ogwe osisi m. Achọpụtara m laser na-atọ m ụtọ nke ukwuu iji, n'agbanyeghị na m kwagara ebe obibi m gaa ebe m na-adọba ụgbọala maka nchekwa na-agbakwunye!
Emechara ihe mbu m jiri Toydiy 4in1 mee. Edere ọtụtụ akụkụ ma gbakọta ọnụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ọdịda okpu n'ihi na ntọala nke, ma mgbe obere mkparịta ụka na-akwado ya ofu. N'ozuzu m hụrụ onye obibi a n'anya.
Ecubmaker Setịpụrụ ụgbọ mmiri iji mezuo nrọ nke ndị Mee. Dịka otu n'ime ụlọ ọrụ izizi iji bulite n'ihu iji mepụta Multi-functional 3D Printer, EcubMaker toro maka ihe ọhụrụ ya na ogo ya.
Iji gaa n'ihu onyinye a na ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ 3D yana ọganihu ya, anyị kwere nkwa inye narị pesenti anyị. Anyị na-arụ ọrụ iji mee ka ndụ onye ọrụ dịkwuo mfe. Anyị chọrọ ka gị na anyị soro wee bụrụ otu onye n’ime anyị kwenyere na ihe ọhụrụ na mgbanwe maka mmadụ.